Kwinqaku lethu "Kunokuba kulungele ukucoca ulusu olunamafutha" siya kuthi, ukuba kunokwenzeka njani ukucima ubuso obunzima. Ungazami ukusebenzisa izigulane ezinamandla, umzekelo, utywala olutywala, zama ukuphuza isikhumba. Oku kuya kunika kuphela umphumo ochaseneyo. Ulusu luya kuzama ukubuyisela ukusilela kwamanqatha, kwaye ngoko kuya kuvelisa i-sebum ngaphezulu.
Ukunyamekela kwesikhumba esinamafutha kunomsebenzi ukusebenzisa izixhobo zasemakhaya. Inketho efanelekileyo kukuba uhlambulule isikhumba izikhathi ezintathu ngosuku. I-fat excess can be removed with napkins paper napkins. Okanye unako ukususa i-swab yekotoni, egcwele i-infusion ye-chamomile chamomile, i-parsley, i-oak bark njalonjalo.
Iimpawu zokunyamekela kwesikhumba
Ukuba isikhumba somnxeba sinokuza kunye nekhefu ekhethekileyo. Ziqulethe amanqatha amancinci, ukhetho oluhle luyi-hydrogel. Kufuneka uyisebenzise imihla ngemihla. Kwakhona kuthengiswa ngamanzi kunye ne-powder, kufuneka zanyanzeliswe ngaphambi kokusetyenziswa. Ubunzima kwintsipho ephantse ingabonakali kwilusu. Ulusu luthatha amaninzi amaninzi kwaye luyeka ukukhanya.
Ukuhlamba ngekhumba elinamafutha
Musa ukuhlamba rhoqo ngamanzi ashushu. Xa uhlamba ngamanzi afudumele, susela ubuso bakho ngamanzi abandayo. Ukuba awuyithandi amanzi abandayo, uhlambe ngamanzi kwiqondo lokushisa. Xa uhlamba, utshise isikhumba sobuso, utyatye itiye emnyama. Izinto eziqulethwe kwiiteyi ziyi-disinfect the pores kwaye zincincile.
Ukuba kunokwenzeka, sula ulusu nge-calendula ukumnika. I-recipe elula yokunyuswa: uthathe isipuni se-calendula esomileyo uze uzalise ngamanzi abilayo, sifaka kwi-thermo imizuzu eyi-15. Gxininisa kwaye uhlabe i-swab yesikotoni, esiya kuyenzela ngaphambili ngaphambili. Siza kuhlamba intamo kwaye sijongane nesicetyhulwa.
Unokuhlamba kunye ne-infusion ye-peppermint-i-teaspoon yamagqabi amhlophe kunye neglasi yamanzi abilayo. Ungasetyenziselwa ukusebenzisa i-birch buds (iposi yeglasi yamanzi abilayo), i-wise, yarrow, i-wort yaseYt. John, unina-non-step-mother, plantain, nettle, cornflower.
Ukuba ulusu luyakwazi ukuthuthumela, kwaye luyingozi, kukulungele ukuhlamba ngokunyusa okubandayo. Ukuba, emva kokuhlamba, uvakalelo lwe-skinness ebonakalayo, okanye ulusu lukhupha, ngoko ke ugcino olucokisekileyo lwekhrikhi olujoliswe kwikhumba elinamafutha kufuneka lisetyenziswe ebusweni obumanzi.
Kabini ngosuku kufuneka usebenzise izilwanyana ukucoca ulusu. Ukuze wenze oku, lungiselela i-lotion yo kucocwa kwesikhumba. Hlanganisa iipunipoji ezi-2 ze-guarana juice kunye nejusi ye-lemon enye. Lo mxube udibaniswa nabamhlophe abamhlophe, ihafu yeglasi ye-vodka kunye ne-teaspoon ye-glycerin.
Okulungileyo kunokuhlambulula isikhumba seoli esinokukhenkcela iindlela ezikhethekileyo-iigel kunye nekhrimu. Baqhawula kwaye basuse isithukuthezi kunye ne-sebum, ebeka iifolo.
Ukuba unesikhumba esinamafutha, kufuneka usebenzise iindlela zokwenza i-exfoliating means for scelling 2 or 3 times in week, kodwa ukuba kukho i-acne esikhumbeni, ukucubungula akucetyiswa. Ukuze udibanise, kufuneka uhlambe, uze uhlabe elukhunjini kwisicatshulwa esincinci esichukumisa ukhilimu. Kwikhumba elisihlambulukanga kungekho elinzulu kunokuba kubekho i-peeling. Ukuhlamba isikhumba sombuso ngebhayisiki ephosa.
Iimaski zesikhumba esinamafutha
Ngaphambi kokuba wenze i-mask, kufuneka ubeke ithawula ebusweni bakho imizuzu emininzi, ephawulwe ngamanzi ashushu. Iifolo zivulwe emoyeni oshisayo kwaye ezo izondlo ezisemasikeni zingene ngaphakathi kwesikhumba.
Mask of strawberry yabo yasendle okanye i-strawberry
Iibhereji zincinci kwaye zidibanise kunye nabamhlophe abamhlophe. Le gruel ukucoca ulusu lentamo kunye nobuso. Xa uluhlu lokuqala lomaski luqala ukomisa, kufuneka usebenzise isalathisi sesibini, kwaye uluhlu lwesithathu. Ekupheleni kwenkqubo, hlamba isiskiti ngamanzi apholileyo.
Umaski wesikhuni sawo lweqanda kunye ne-cranberry okanye ijusi lemon
Ijinki ye-Yolk nehafu yesipuni sesipuni se-lemon okanye i-cranberry juice. Faka isicelo semaski ebusweni, ubambe imizuzu engama-15 ukuya kwezi-20, uze ususe ngamanzi afudumele.
Umaski ovela kwi yogurt okanye kwi-yogurt
I-swab yesikotonti, sebenzisa ulusu lobuso lobisi okanye i-yogurt. Ubambe imizuzu eyi-15. Emva koko uhlambe i-mask ngamanzi afudumele. Imbewu okanye i-kefir inokuthi ithathelwe endaweni yelisi. I-Serum, i-curdled ubisi okanye i-yogurt ingaxutywa kunye nesincinci se-cottage cheese. Le maski iyomisa isikhumba.
Isikhwama sesikhumba sesikhumba seoli
Thatha isipuni se-yogurt, isipuni sejisi kunye ne-tablespoon ye-fat-fat cottage cheese uze udibanise yonke into. Imaski isetyenziswe ebusweni imizuzu eyi-15, kwaye uhlanza ngamanzi afudumele.
I-egg kunye ne-apple mask yokudibanisa kunye nesikhumba seoli
Thatha i-apple eluhlaza, i-yolk yolanga kwaye udibanise kakuhle. Faka isicelo kwisithuba imizuzu eyi-15, uze ususe ngamanzi afudumele.
Umququ we-Cornflower wesikhumba seoli
Thatha isipuni seentyantyambo ze-cornflower uze uwathulule ngamanzi abilayo kwaye ubilise imizuzu emi-2. Yongeza kwaye wongeze isipuni sefulawa we-rye kunye namaconsi angu-10 ejisi lemon. Gcina kakuhle kwaye usebenzise isiskto ebusweni malunga nemizuzu eyi-15 okanye engama-20. Gcoba umsiki ngamanzi afudumele.
Isikhumba saluphi na uhlobo luhlambulula ukucocwa komhlaba, lenza ulusu lukhuphe, lube lukhulu kwaye luhlambulule - luhlambe ngeoli yezolimo. Emanzini atshisayo, kufuneka udibanise i-cotton swab, udibanise, uze udibanise kwioli, kunokuba nayiphi na i-peach, ingqolowa okanye umnquma. Sula ulusu entanyeni kunye nobuso nge-swab. Emva kwemizuzu emi-2, susa ioli kunye ne-cotton swab edibeneyo ngamanzi abilisiwe, itiye okanye kwi-decoction yemifuno.
Ukuhlamba nge-kefir, ubisi oluboyiweyo, ubisi obomuncu, ukhilimu ugubungela ulusu, lususa amabala e-pigment, i-freckles, inondla, iluhlaza kwaye ihlambulule. I-fatter kunye ne-skin, i-acid iyimfuneko ukukhetha imveliso yokuhlamba. Yomisa i-swab yekoton egxile kwi-yogurt, i-kefir, ubisi obomuncu kwaye usule ubuso. Emva koko thabathe indawo ye-tampon uze usule ubuso kwakhona. I-tampon nganye elandelayo ifuna ukuxhamla kakhulu. Emva koko ususe i-kefir engaphezulu, supha ngamanzi kwaye usetyenzise ukhilimu onondla.
Ikhupha i-pores, ihlambulule, yenza i-skin elastic, ikhuphe amachashaza amnyama. Ihlambulukile kwaye ihlambulukile, ihlamba kunye nokongezwa kwe-oatmeal. Le maski ilungile ukususa i-makeup. Iifubhekiti zinokuthi zibe phantsi kwindawo yokugaya inyama okanye kwi-grinder. Kufuneka uthathe iglasi ye-oatmeal, engeza isipuni se-boric acid okanye i-baking soda, xuba kunye nokugcina kwisitya. Ukuhlamba kwanele ukuthatha isipuni soxube, yongeza ubisi omuncu okanye amanzi ukwenza i-gruel, kwaye usebenzise entanyeni nasebusweni. Xa yonke imaski iqala ukulahla phezu kwesikhumba, kufuneka uhlambe ngamanzi afudumele kwaye uhlanjululwe ngamanzi acocekileyo okanye acocekileyo.
Ngoku siyazi indlela yokucoca ngokucacileyo isikhumba samanzi. Iimaski zesikhumba esinamafutha zinemiphumo ephuculisayo kunye ne-antiseptic kwiinkqubo ezivuthayo, kwaye ngokuyinhloko injongo yazo - zincinci iipore, zinciphisa i-sebum kwaye zicoceke ngokucokisekileyo ulusu lobuso.
Ubisi busika ngobuso, zokupheka
Ikhompyutheni yobuhle be-Autumn kwizinto ezintsha zokuthengisa iimveliso
Iipropati ezisebenzayo ze-fish mullet
Iibhisikidi ze-tshokoleta kunye ne-espresso
I-pizza kunye ne-asparagus kunye anyanisi
Isidlo esivela kwi-sorrel enkukhu, inyama kunye nemifuno yemifuno-i-step-by-step recipes kunye neefoto namavidiyo
Ukucinezeleka kukuvimbela ukuba uphile ngokuqhelekileyo
Ukuzivocavoca ngesisu esisisigxina
Yintoni ekufuneka ibe yayizikhulu zeengxenye?
I-Focaccia ngemifuno emnyama
Isondlo esifanelekileyo sokomeleza i-vascular